Omenala ihennyapade, Omenala Decal, Omenala akara, Omenala Metal ihennyapade - Ever Greater
Omenala Vinyl ihennyapade
Omenala Vinyl Decal
Omenala Dome ihennyapade (epoxy ma ọ bụ Pu)
Metal ihennyapade & Metal Nameplate
Electron-kpụrụ ihennyapade (Nickel ihennyapade)
Akara & Baajị
3D Chrome / Nickel labelụ
Ịkwanyere ngwa nju oyi Igwe Ọdụdọ & ụgbọ ala Igwe Ọdụdọ
Nrite, Pin baajị, Metal isi yinye & Metal craft
Anyị na-na mepụtara 1000 nke designs.We nwere otu ìgwè ndị na-emepụta na-eche ịnụ gị requirements.Just ka anyị mara ihe dị gị mkpa, ihe ọ na-na-eji maka, na mgbe ị kwesịrị ya site, na anyị ga-esi nri na ya!
Iji zụlite zuru okè ihennyapade maka ị anyị ihennyapade ọkachamara ga-arụ ọrụ anya na gị otu iji jide n'aka na imewe ọkụ ọgwụgwụ result.With ihe karịrị afọ 20 na ahụmahụ anyị ga-eme nke a rụọ ọrụ nke ọma na effectively.You nwere ike ịgụ na anyị!
Anapụta a oru ngo maka anyị bụghị naanị banyere eziga gị a shipment.Our mgbaru ọsọ bụ iji jide n'aka gị fina N'ihi eme nnọọ dị ka i chere it.We nkwa napụta mma, ngwa ngwa, na a pụrụ ịdabere na ya pụta n'oge ọ bụla ogbo nke oru ngo.
Na mgbe ukwuu, akwụkwọ mmado na-anyị ahuhu.
Big n'anya, ndị nta na ndị, na-akpa ọchị, ndị dị oké njọ omume, Anyị na-eme ya all.Need ihe mgbe mere tupu? N'aka ya ruo us.As ụlọ ọrụ lagoro ezumike nka na karịrị afọ 25 na 'ahụmahụ, e na-na na ọ fọrọ nke nta mba mmado anyị mere .
Anyị na-enye a dịgasị iche iche nke ihe na pụrụ iche teknụzụ maka ịhọrọ from.Just kpọtụrụ anyị ihennyapade uru na ha ga-maksure ị ga-esi zuru okè mmado gị mkpa, ma na-achọ.
3D chrome labelụ & Nickel Label
Baajị & akara
Dome ihennyapade Pu ma ọ bụ epoxy ihennyapade
Nrite, Metal Eriri Ngakọ Igodo & Metal craft
Anyị nso nso Project
M na-arụ ọrụ na Miranda Wang kemgbe 2009, ọ egosiwo oge na oge ọzọ ya ezi ike n'ezi ihe na ọchịchọ siri ike na-eje ozi m dị ka a-eguzosi ike n'ihe ahịa ma napụta ngwaahịa na oge na na mmefu ego. M ga-eji obi ha dum na-agba gị na-ekwe ka Miranda nwee ohere igosipụta na gị onwe gị otú ahụ, ya na otu ga-enwe ike inyere gị aka isi iyi ngwọta maka gị buisness. M ga-enwe nnọọ obi ụtọ na-ekwurịta okwu na gị onwe gị na-egosi m nkwanye
Quality bụ mgbe ihe mberede. Ọ bụ n'ihi nke nwere ọgụgụ isi mgbalị. M mara Miranda ruo oge ụfọdụ ugbu a na ya na ya otu mgbe Ever Greater egosi ihe niile m anya n'ihi na na a ike Chinese emeputa. M mpako na-akpọ ha "ndị m tụkwasịrị obi ibe"
Abdel - Eastheimer International nke Hong Kong
M na-arụ ọrụ na Miranda dị iche iche oru n'oge gara aga afọ ole na ole m nwere ike ezi na-ekwu na ọ bụghị naanị na a obi ụtọ na-arụ ọrụ ma otu n'ime ndị kasị Switched na na oru oma ọkachamara m na-abịa gafee. Ma ị na-arụ ọrụ na ya ozugbo na a otu ma ọ bụ na ị na-arụ ọrụ na ya na a sourcing / azụ ikike, ọ na stof mere na mgbe o yiri ka abịa na otutu ụzọ gara aga a nsogbu. M ukwuu nwere ike ikwu na-arụ ọrụ Miranda na pụrụ-ekwe nkwa na-emeso ya ma ọ bụ ya ụlọ ọrụ ga-a ezigbo onye na hassle-free ahụmahụ.
Ị International Trade Company